Somali News – Dalkaaga.com
Home / Somali News
Somali News Updated Hourly
23 hours ago	Somali News 0
Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa weli ku guda jira safar uu ku marayo qeybo ka mid ah dalka, wuxuuna la kulmayaa soo dhoweyn ballaaran. Waxaa la filayaa in uu maanta goobjoog ka noqdo dhaqangalka heshiiskii ay wada saxiixdeen maamulka Galmudug iyo Ahlu-sunna Waljamaaca. Hadaba madaxweyne Farmaajo …
Dhageyso: Gen: C/wali Jaamac Cabdule Gorod oo sheegay gobolka Mudug hadii nabad laga dhigo in Soomaaliya dhan nabad noqonayso
24 hours ago	Somali News 0
Xili Mudooyinkii danbe uu gobolka Mudug ku sugnaa wafdi uu hogaaminayo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayuu ka hadlay Nabad galyada gobolka Mudug iyo halka ay u marayso hawsha Nabada. Gen: C/wali Jaamac Cabdule Gorod Taliyaha ciidamada Xogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay xiligii dalka Soomaaliya uu xoriyada u istaagayey in …
Dhageyso: Cali Cabdi Awaare oo ah musharax Madaxweyne Puntland oo ku baaqay in xilka lagu aamino loona doorto
Xukuumada uu hogaaminayo Madaxweynaha dawlada Puntland Muddadii loogu talagalay ee 5 Sanno ahayd ayaa waxaa jira musharaxiin xiligan shaaciyey inay u taaganyihiin Xilka Madaxweynaha Puntland. Musharax Madaxweyne Puntland 2019 Cali Cabdi Awaare oo kusugan magaalada Boosaaso ayaa sheegay inuu u taaganyahay xilka Madaxweynaha dawlada Puntland isagoo sheegay inuu dhowr jeer …
Dowlada Itoobiya iyo Somaliland oo xoojinaya Xiriirkooda
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Hailemariam Desalegn iyo Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xalay waxa ay kulan gaar ah ku yeesheen Magaalada Addis Ababa ee Caasimadda dalka Itoobiya. Saraakiil ka qeyb gashay kulanka ayaa sheegay kulanka in diirada lagu saaray dhinacyada Ammaanka, Ganacsiga Berbera iyo xoojinta xiriirka ka wada dhexeeya labada …
Daawo Muxaadaro: Miraha uu imaanku leeyahay 2018
1 day ago	Islamic Studies, Sheekh Mustafe, Somali News 0
Cadeymo la soo bandhigay in madaxweyne Trump uu maskax ahaan caafimaad qabo
1 day ago	Somali News 0
Dhakhtarka gaarka ah ee madaxwayne Donald Trump ayaa wariyayaasha u sheegay in caafimaadka madaxwaynaha uu wanaagsan ,ka dib baaritaankii caafimaad ee ugu horreeyay ee lagu sameeyay. Admiral Ronny Johnson ayaa sheegay in baaritaan caafimaad oo dhanka maskaxd ah uu ku sameeyay madaxwaynaha taasi oo uu codsaday Mr Trump islamarkana natiijada …
Wasaarada Caafimaadka Dalka Uganda oo sheegtay kaydka dhiiga inuu gabaabsi yahay
Waaxda caafimaadka dalka Uganda ayaa ka digtay in uu si aad ah u hooseeyo dhiiga yaala goobaha lagu keydiyo dhiigga bukaanada lagu shubo. Xarunta lagu kaydiyo dhiiga ee ku taalla caasimada Kampala ayaa la sheegay in dhiiga yaraan ay ka jirto oo dhiiga yaalla xaruntaasi uu gabaabsi yahay . Goobtani …
Dowladaha Mareykanka iyo Canada oo ku baaqay in la dhaqangaliyo cunaqabataynta Kuuriyada Wuqooyi
Labaatan dal oo ay horkacayaan Canada iyo Mareykanka ayaa ku baaqay in si adag loo dhaqangaliyo cunaqabataynta ka dhanka ah Kuuriyada Wuqooyi. Wasiirka arrimaha dibadda Canada Chrystia Freeland, oo marti galisay shirkan oo ka dhacay Vancouver, ayaa sheegtay in aysan iska indha tiri Karin iyada oo khatarta Niyukleerka Kuuriya Wuqooyi …
Maraykanka oo hakinaya gargaarkii uu siin jiray Falastiiniyiinta
Maamulka Trump ayaa hakiyey in ka badan kala badh lacagtii uu siin jiray wakaaladda Qaramada Midoobay ee taageerta Falastiiniyiinta. Maraykanku wuxu sheegay in uu sannadkan u sii dayn doono lixdan milyan oo doolar oo ka mid ah intii ugu horraysay ee dhaqaalaha sanadlaha ah laakiin uu hakin doono shan iyo …
Daawo Sawiro: Madaxweyne Farmaajoiyo oo ku guda jira socdaalka nabadda iyo dib u heshiisiinta oo socdaal dhulka Ah kumaraya Galgadiid
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku guda jira socdaalka nabadda iyo dib u heshiisiinta ee uu ku marayo qeybo ka mid ah gobollada dalka ayaa shalay gaaray magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Gobolka Galguduud si loo dhameystiro heshiiskii Galmudug iyo Maamulka Gobollada Dhexe ee Ahlu Sunnah Wal …